Posted By: KongoLisolowaa: Diisambar 22, 2019 12: 30 No Comments
1 - Beenta 2 - Jinsi 3 - Caroos 4 - Dhunkasho 5 - Cafis 6 - Xaq 7 - Lacag 8 - Daacadnimo 9 - Fla ... Akhri wax dheeraad ah
Dhibaatooyinka cabsida leh ee cabsida: marka aan ruxo saacadaha oo dhan, waxaynu u qaadannaa wax kasta oo loogu talagalay rampart, ka dibna waan luminaynaa dhamaanteen nasiib darro, waxaanan seegi doonaa qof walba
Posted By: KongoLisolowaa: May 21, 2019 12: 00 No Comments
Markaan khatar gelino jiritaanka jiritaankeena anagoo ku xisaabtameynaa si fudud, waxaan ku dabaalan doonaa si taxadar la'aan ah waxaana na badin doona aayaha. Marka gogoshanku ... Akhri wax dheeraad ah
Markuu Gypsy sheego runta, mar noloshiisa, wuxuu qaniinaa farihiisa "Halkan waxaa ah 10ka runta ah ee nolosha":
Posted By: KongoLisolowaa: Abriil 30, 2019 2: 05 No Comments
1. Ha ku taaban kartid ilkaha oo dhan carrabkaaga. 2. Dhammaan doqonnada, ka dib markii ay akhriyeen runta ugu horreysa, way isku dayeen. 3. Runta koowaad waa been. 5. Adiga ... Akhri wax dheeraad ah
Posted By: KongoLisolowaa: Maarso 16, 2019 12: 40 No Comments
Titanic sidaas ayuu uga tagay sheeko khuraafaad ah. Tani waa sababta: Léonardo DiCaprio wuxuu ka dhigay filim dhan dhaqaaq ah; Fannaanka Quebec Céline Dion ayaa tuurtay ... Akhri wax dheeraad ah
Aqoonsiga Voodoo ee John Paul II: Pope John Paul II wuxuu u aqoonsaday Voodoo inuu yahay diin xaq u leh diimaha kale, laakiin qaarkood qaar Afrikaan ah, waalan oo ku saabsan Ciise, weli waxay u arkaan sixirka
Mararka qaarkood silsiladaha naga horjoogsanaya inay noqdaan kuwo lacag la'aan ah waa kuwo maskax ahaan ka badan maskaxda
Koonfur Afrika oo ku dhawaaqday inay ka baxayso ICC
Feb21 05: 06